Idili Elisha Elikhulu Lokumaketha Okunomthelela - ngezibonelo | Martech Zone
Kufanele ngiqale ngokuthi ungaphuthelwa Douglas KarrIsethulo sokukhangisa okunomthelela kwaSocial Media Marketing World!
Kuyini I-Influencer Marketing?
Ngokuyisisekelo, kusho abantu abanethonya, ama-blogger noma osaziwayo abanokulandelwa okukhulu ukukhuthaza umkhiqizo wakho kuma-akhawunti abo aku-inthanethi. Okufanele bakwenze mahhala, kepha iqiniso ukuthi ukhokha ukuze udlale. Lokhu kuyimakethe ekhulayo futhi imbuyiselo ingaletha impumelelo yakho enkulu yomkhiqizo uma yenziwe yasebenza kahle.
Ngiyazi ukuthi lokhu kungazwakala kancane digital back-alley kepha akukho okusha noma okungaqondakali ngale ndlela yokukhangisa, noma njengoba thina embonini sithanda ukubiza ukufinyelela. Esikhathini esedlule ubuzozwa nje, INike ivumela uMichael Jordan or URoger Federer wenza izigidi ezingama-71 ngonyaka ngabaxhasi. Njengoba isikhathi siqhubeka izinkampani zaba nolaka ngokwengeziwe, UNadal ukhokhe u- $ 525,000 ukugqoka iwashi eFrance evulekile or UTiffany & Co ukhokhela u-Anne Hathaway u- $ 750,000 kuma-Oscars. Namuhla, lezi zinkampani sezingenile ukubeka phansi izimpi zokubhida ukukhokhela abantu ukukhangisa imikhiqizo yabo (ake sikubize ngokuthi kuyini) ngezinkanyezi ezinjengoJennifer Lawrence.
Kepha kuthiwani ngomhlaba wonke? Ngabe kukhona abanye abantu abanethonya ukuthi imikhiqizo ingakhokha imali ukukhuthaza imikhiqizo yabo? Ngabe abantu ababhuloga noma abanama-akhawunti ezokuxhumana athandwayo banokufinyelela okwanele kwemakethe ukudala i-buzz yezokuxhumana?
Yebo. Futhi kwakhiwa imboni yonke ezungeze le ndlela yokukhangisa, ikhodi ibizwa ngegama ukumaketha kwamathonya. Izinkampani ezingama-Fortune 500 zikubiza kanjalo ukukhangisa kwendabuko, Izinkampani zokukhangisa kokuqukethwe zikubiza kanjalo abakhangisi futhi ngokudume kakhulu I-Blogger noma i-Influencer Outreach. Lokhu akufanele kudidaniswe nakho amavidiyo axhasiwe noma “ama-tweets axhasiwe”Noma okuthuthukisiwe okuthunyelwe ku-Facebook. Lawa ngamathuluzi akhiwe ngqo ezinkundleni zokuxhumana ezifana ne-Twitter ne-Facebook.
Bheka, lezi zindawo ezinamandla ezokuxhumana nabantu azisafani nakuqala. Uma sekuyindawo yomndeni nabangane yokwabelana ngezithombe nokuhlala bexhumana, manje sekuyindawo yokukhangisa yokugcoba kahle elungele ukukhomba izethameli ngokunemba okungakholeki. Amapulatifomu afanayo asetshenziselwa ukuhambisa imininingwane evela kuzo zonke izinhlobo zama-blogger, ubuntu, nabantu abathuthukisa imikhiqizo emhlabeni wonke. Kepha akukhona konke okuqukethwe okwenziwe kulingana. Ngabathonya lapho abafinyelela izigidi zabantu ngaphakathi kwenani labantu, umdlalo usushintshele abakhangisi.
Yibize ngokuthanda kwakho, umugqa ompunga phakathi kwemikhiqizo edala okuqukethwe nemikhiqizo edala izikhangiso ezakhelwe ukubukeka njengokuqukethwe kudala yawela. Namuhla, kuvame kakhulu ukuthi i- I-FTC ivuselele imihlahlandlela yayo kokuvumela e 2009 futhi imihlahlandlela ekukhangiseni kwedijithali ngo-2013. Yithande noma uyizonde, kusemthethweni, ama-brand ayakwenza, futhi abadali bokuqukethwe bathola kuyo, isikhathi esikhulu.
Ngakho-ke, umkhiqizo wakho ungazuza kanjani ekukhangiseni okuthonya? Uyazi ukuthi lilungile yini ibhizinisi? Masibuyekeze ezinye izibonelo, isoftware namasu angakuqalisa ngejubane lokumaketha kwedijithali!
Izibonelo Zokumaketha Ezinomthelela
Ngokuya ngesabelomali sakho ungakwazi ithonya usaziwayo, indawo yezindaba, ibhulogi noma umuntu nje odumile kuFacebook. Ake sibuyekeze ezinye zezibonelo zalokhu ukuze siqonde kangcono ukuthi ukumaketha okunomthelela kusebenza kanjani.
Wenatubers - Thatha iPixiwoo, Bangodade abanabalandeli abayizigidi eziyi-1.7 abanentshisekelo yokwenza izimonyo. Baqhuba umagazini wamahhala wokwakheka kwedijithali futhi bazibeke ngokwabo ngebhulogi yabo, isiteshi se-Youtube, nasezibambo zezokuxhumana zenhlalo njengochwepheshe bezimonyo. Qaphela ifayela le- SEBENZA NATHI: Imibuzo ngebhizinisi… esigabeni esimayelana nami sekhasi.
Pinterest - I-Pinterest yenye yezimakethe ezinethonya elikhulu kuwebhu. Abaningi I-PinPro's njengoba ngithanda ukubabiza kanjalo, nginezigidi zabalandeli kanye nethonya elinamandla phezu kwemikhuba yokuthenga ngaphakathi kwemiphakathi. Faka UKate Arends, iPinPro enabalandeli abayizigidi ezingama-2.6 nomthelela omkhulu esigabeni sobuhle nemfashini. UKate ugijima a Imikhiqizo ibhodi ku-Pinterest yakhe ngayinye enesixhumanisi sokuthi ungayithenga kuphi leyo nto.
Twitter - I-Twitter iyindawo yokuvinjelwa kwezinhlamvu eziyi-140, kepha lokhu akuvimbanga izinkulungwane zamandla ezinamandla omphakathi ekufinyeleleni ezigidini zabathengi ngemikhiqizo yabo. Thatha isibonelo @NomzamoMbatha - I-Global Brand Ambassador ye @Zipkick - uhlelo lokusebenza lokubhuka uhambo. Ngabalandeli abangaphezu kwesigamu sesigidi, ungabona ukuthi kungani kuyinto enhle ye-PR yeZipkick!
Facebook - Cishe noma yimuphi umuntu onethonya kunoma iyiphi inethiwekhi une-Facebook. I-Facebook ayiwona umthombo oyinhloko wethonya lomthengi, kepha ngokuqinisekile iyisengezo esinamandla ku-arsenal yomgqugquzeli. Uma uzokhokhela umthelela bazobe bethumela okuqukethwe kuzo zonke iziteshi, kufaka phakathi i-Facebook. Ngobubanzi bohlobo lokuqukethwe, leplatifomu iyithuluzi lokuthumela imiyalezo. Isibonelo esisodwa salokhu singabonakala kuSydney Leroux, umdlali webhola lezinyawo owathola izindondo zegolide kuma-Olympic.
iza - IViner edumile (306K) UMegan Cignoli isebenza ngemikhiqizo embalwa eVine, kufaka phakathi ukuthuthukisa le vidiyo eyodwa yamaWarner's Bras. Ngokuvumelana ne AdAge, baqale umkhankaso wabo #netcomfortable ngabalandeli abangama-zero futhi bagcina cishe nge-5,000. Izenzo zenhlalo sezisondele ku-500,000 ukuthandwa, ukuphawula kanye nokuvuselelwa, kufinyelela ku-9.8 million.
Blogs - Uke wabuza Douglas Karr mayelana Martech Zoneka- ithonya? Sekuyindawo emaphakathi kuwebhu yabakhangisi abacwaninga noma abathatha isinqumo ngesinqumo sabo sokuthenga esiteji esilandelayo sokumaketha. Martech Zone unenhlangano ekhulayo ngemuva kwayo, DK New Media, abasiza imikhiqizo emikhulu nezinkampani zobuchwepheshe bezentengiso ukukhulisa isabelo sabo semakethe. Baphinde babonisane nabatshalizimali ngamathuba otshalo-mali, ucwaningo lokuncintisana, njll. Ekhangisweni lokukhangisa, uDoug unikeza imininingwane ngewebhusayithi yakhe nethrafikhi yezenhlalo futhi unikeza indlela elula yokuthi ama-brand akwazi ukuxhumana.
Instagram: @Swopes ukude nomphembeleli ophezulu ku-Instagram, kepha usathinta ukulandela umxhwele kakhulu kwe-250K. Ngalezo zinhlobo zezinombolo umkhiqizo wakho ungabonakala futhi uzuze emkhankasweni ophumelela kakhulu wokuvela. I- @ Swopes inesixuku esencane, nesinomdlandla sephathi esilandelayo ngakho-ke lesi sikhangiso esenziwe nguMoet & Chandon sasibekwe kahle futhi sathola cishe ukuthandwa okungu-7.5K.
Ubathola kuphi Abathonya?
Manje uyazi ukuthi abagqugquzeli bakhona lapho futhi ama-brand ayabasebenzisa, kepha uyazi ukuthi kanjani? Ake sithi kunendlela elula futhi enzima. Indlela enzima iyindlela yokuqala esetshenzisiwe embonini, ucwaningo. Lokhu ngokuvamile bekusho ukuthola amahora amade ukuthola, ukuxhumana, ukukholisa, ukuxoxisana, ukunqamula okuqukethwe, ukusebenzisa, ukulandelela nokulinganisa. Lokhu kungacindezela futhi kuvame ukuthatha abantu abaningana abasebenza isikhathi esigcwele ukufeza. Buza noma iyiphi i-PR, SEO, social noma enye inkampani yezentengiso yedijithali futhi bazokutshela ukuthi lolu hlobo lokumaketha lungadla isikhathi esingakanani.
Emuva eminyakeni emi-5 edlule inkampani ye-SEO engiyiphethe ibinganikela ngesisebenzi esingu-1 ukuthola nokuxhumana nama-blogger kanye nomunye wokuxoxisana, ukuphatha nokulandela umkhankaso… weklayenti elilodwa nje! Jeff Foster, Isikhulu Esiphezulu se- I-Tomoson.
Ngenxa yokukhungatheka ukuthola nokuxhumana nabashukumisi ngemali ephansi nangesikhathi esifanele, izimakethe ezinethonya ziqale ukwakheka. Izinkampani zakha amapulatifomu avumela:
Abathonya babhalise futhi babonise abalandeli babo bezenhlalo kanye ne-traffic traffic.
Imikhiqizo yokuthenga ukukhangisa okuxhasiwe ngokuchofoza inkinobho.
Izindawo zokuthengisa ezinamandla ezithonya amapulatifomu yilezi:
I-Tomoson - i-blogger nomphakathi webhizinisi
Ithonya - Abathonya be-Youtube
I-Tomoson ivumela imikhiqizo ukuthumela okuqukethwe okudaliwe futhi kube nama-blogger afanele afaka isicelo sendatshana. Lokhu konga izinsuku zomsebenzi futhi kusiza umkhiqizo ukuthi unciphise umbhali ophelele. Ama-blogger anethonya atholakala kalula kwimikhiqizo ku-Tomoson.com Ngamunye onamaphrofayli akhombisa ukubala kwawo okulandelanayo nomlandeli wemakethe
Isoftware Yokumaketha Enomthelela
Kukhona nesoftware laphaya evumela abathengisi ukuthi bathole ngokukhethekile abantu abanethonya ezinkundleni zokuxhumana. Ngokungafani nezimakethe ezingenhla, ama-blogger owathola ngalezi zinsiza ze-software awakhethi ukungena. Laba bantu abanethonya abazibhalisanga futhi bathi yebo ngizimisele ukwenza okuthunyelwe okuxhasiwe”NgamaRandi angu-500. Esikhundleni salokho isoftware iyakhasa kuwebhu, ifuna ukulandelwa okuphezulu nethrafikhi ephezulu yewebhu. Uma sekuhlanganisiwe, lokhu kuvumela ama-brand ukuthi athole kalula futhi afinyelele kulaba bathonya.
On I-Tomoson kulula kakhulu ukuthola hhayi ama-blogger anethonya kuphela kepha ama-blogger afanele, alungele ukubhala okuqukethwe okuthokozisayo nokwabelana ngomkhiqizo wakho.
Isu Lokumaketha Elinomthelela
Lapho ucabanga isu, kuzomele uqale ucabange ngomkhiqizo wakho. Ngubani umuntu obhekiswe kuye, futhi yiziphi izinto abazithandayo? Uzama ukufinyelela kubani? I-Mommy blogger ethanda ukwenza ubuciko futhi echitha izinsuku zayo iphina ku-Pinterest? Isihambi esikhulu sesabelomali esihlela ukusesha isithombe esihle se-Instagram? Noma mhlawumbe intombazane eyeve eshumini nambili efunda ukuthi ukwakheka kusebenza kanjani kahle ngebala layo ku-Youtube. Konke kumayelana nomkhiqizo nethagethi. Abathonya bangaba yisinqumo esinamandla ekumaketheni kwedijithali lapho kusetshenziswe kahle nangokuhle, okuqukethwe okukhuthazayo, okuhlekisayo, noma okusebenzisekayo kulethwa kubantu ababhekiswe ngqo kubo.
Thatha uMarriott ngokwesibonelo, Bathole ama-blogger ayi-8 anethonya elikhulu ngosizo lwe-Diamond PR, abanikeze izikweletu zehhotela eFlorida futhi babavumela bajabulele abakufunayo ngokwentando yabo. Ngemuva kokujabulela ukumba kwamahhala baqhubeka neziteshi zabo futhi batshela umhlaba ngokuhlangenwe nakho kwabo okumangalisayo endaweni ngayinye yaseFlorida Marriott.
Lapho uthengisa isipiliyoni (kunokuba umkhiqizo) njengoMarriott, bakuthola kungcono ukuvumela abagqugquzeli ukuthi babe nakho mahhala futhi batshele umhlaba ngakho. Lokhu kwakuyisu elihle nokubulawa okunambitheka kakhulu. TheOutReachMarketer ubika imiphumela yalo mkhankaso kanjena:
Uthole izikhala ezingama-39 zebhulogi
Kuhlanganisiwe ama-blogger ayi-8 afinyelela izivakashi ezi-1,043,400 eziyingqayizivele zanyanga zonke
The #BloggingFL i-hashtag ifinyelele cishe ku-8 million ukudiliva umugqa wesikhathi we-Twitter
Nge-Facebook naku-Instagram, ama-blogger afinyelele kubantu abacishe babe ngama-30,000 ngabalandeli babo
Esinye isibonelo esihle kulapho uWendy eyiphonsa emuva, ethinta omama nababhlogi bezitayela / bezitayela ebanikeza ngamunye isigqebhezana samahhala seqhwa. Inhloso bekuwukukhuthaza ukuthi ama-frosty's isiyatholakala kuma-waffle cones. Ngamunye wama-blogger wacelwa ukuthi athumele okuqukethwe okubandakanya ukubukwa okuhehayo okuhambisana nezinkumbulo ezinhle ezibuyiswe ngokujabulela isithwathwa sikaWendy. UWendy uzuze lukhulu kulokhu ngokuqukethwe okuhle okwabiwe kuzo zonke iziteshi zokuxhumana.
Isihluthulelo sempumelelo lapho usebenzisa ukumaketha okuthonya ukwazi umkhiqizo wakho nemakethe yakho oqonde kuyo ngaphakathi nangaphandle. Udinga ukwazi abakuthandayo / abangakuthandi, izinto abazithandayo kanye nezinto abazithandayo. Abagqugquzeli bedijithali bamane nje bangabaxhasi besikhangiso. Okubaluleke kakhulu ngokuya nge-ROI nokufinyelela komlayezo yikhwalithi yokuqukethwe, kanye nokuqondiswa kokuphakanyiswa. Uma uhlinzeka ngokuqukethwe OKUKHULU futhi ukuqondise ku-bullseye uqinisekile ukukukhipha epaki.
Tags: anne hathawayibhulogiFacebookukumaketha kwamathonyaukuthonya amasu wokumakethaamathuluzi wokukhangisa athonyaAbathonyaukuthonyainstagramizeamarriottukufaneleka kwamadodamichael jordaninadalnichenikeikhabethe elibomvui-roger federermandlaumakethe wokufinyelelatiffany & Co.ikusasaTwitterNgifikile
Mar 10, 2015 ku-8: 15 PM
Ngiyamthanda uTomoson! Ngiwasebenzisa ngaso sonke isikhathi ukuthola imikhiqizo enhle engizoyibuyekeza abalandeli bami futhi kube yisipiliyoni esihle. Ngisanda kuqeda ukubuyekeza kwami ​​kwama-29 kubo.
Mar 10, 2015 ku-8: 56 PM
Ngingumuntu onethonya kuTomoson futhi bekukuhle ukusebenzisana nami. Ngenze ukubuyekeza okuningi okuthembekile ngabo futhi anginazikhalazo. Izinkampani ezisebenza noTomoson bekukuhle ukusebenzisana nazo.
Mar 20, 2015 ku-1: 46 PM
I-athikili enhle - Ngidlale ngokuzungezile namanye amapulatifomu ashiwo kokuthunyelwe kanye neGrouphigh (okuhle ukuthola amabhulogi anethonya). Imicabango ngezindlela ezihamba phambili zokuthola abagqugquzeli kuzingxenyekazi ezifana ne-Snapchat noma i-Tumblr?